‘Tarkaanfiin seera kabachiisuu Oromiyaa keessaa karaa seera hordofeen ta’uu qaba’ – Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa – Kichuu
HomeAfaan OromooVideos‘Tarkaanfiin seera kabachiisuu Oromiyaa keessaa karaa seera hordofeen ta’uu qaba’ – Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa
‘Tarkaanfiin seera kabachiisuu Oromiyaa keessaa karaa seera hordofeen ta’uu qaba’ – Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa
Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa haalli qabannaa mirgoota namoomaa namoota to’annoo jala jiranii naannoo Oromiyaa keessa jiru isa yaaddessuu ibse.
Komishinichi ALI Sadaasa 11, 2013 hanga Amajji 04, 2013 naannicha keessatti haala qabiinsa namoota to’annoo jala jiranii ilaalchisuun hordoffii taasiseen rakkooleen mirga namoomaa jiraachu adda baasuu ibsa baaseen mul’iseera.
Keessumaa, buufataawwan poolisii 21 namoonni ajjeechaa Artist Hacaaluu Hundeesaa hordofee to’ataman dabalatee kanneen biroo “haala yeroon” to’ataman jedhaman hedduu keessatti argamaniifi komiin irra deddeebiin irratti dhiyaaturratti hordoffii taasisaa turuu eera.
Yeroo hordofaa ture kanattis, namoota to’annoo jala jiraniifi aanga’oota buufataawwan poolisii waliin kan mariyate yoo ta’u, bu’aa hordoffii taasisellee naannicha keessatti qaamoleen dhimmi ilaallatu akka warra seera kabachiisaniifi bulchitoottti beeksisuun deebiin akka irratti kennamuufillee gaafachuu ibsa.
Komishinichi buufataawwan poolisii daawwaterraa akka hubatettis haalla qabiinsa mirgoota namoomaa namoota hidhaa jiranii akka malee yaadessaa waan ta’eef atattamaan foyyaa’uu qaba jeheera.
Namoonni heduun buufatawwwan poolisiitti hidhamanii jiran ajaja mana murtii malee “haala yerootiin” warra shakkamaniha jechuun akka hidhaman hima Komishinichi. Namoota to’annaa jala jiran keessaa harki caalan osoo qorannoon irratti hin taasifamiiniifi mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin yeroo seeraan taa’een ol hidhamanii akka turan ragaaleen mullisan amansiisoo dhiyaataniiru.
Dabalataanis, buufataawwan poolisii hedduu keessatti sababa abbootiin alangaa raga gahaa dhabuu isaaniitiin “murtee isaan hinhimachiisu” jedhu irratti kenname ykn ajaja mana murtiitiin shakkamtoonni gadhiifamuun kan isaanirra ture qooda fudhattoota ijoodha (Core) warra ta’anidha ykn yakka biraatiin barbaadamu jechuudhaan seeraan ala hihamanii akka turan godhamuu hubatameera jeha Komishinichi.
Aanga’oonni buufataawwan poolisii dhimmi namoota “haala yeroon” shakkamanii hidhaman kan ilaalamu “Mana maree nageenyaa” sadarkaa godinaafi aanaaleetti hundeefamaniin akka ilaalamu ibsu jedha Komishinichi.
Adeemsi hojii akkasii kun ammoo shakkamtoonni karaa seeraan gaafatamuun hafee murteewwan siyaasaa (bulchiinsaan) akka miidhaman taasiseera jedheera Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa.
Hidhamtoonni buufataalee hordoffiin irratti taasifaman keessaa muraasni isaanii wayita poolisiin to’atamniitti, akkasumas buufataalee pooliisii keessatti sababii garaa garaatiif reebiichi irratti raawwatamu kan ibsan yoo ta’u, gareen hordooffiis kanneen qaamasaanii garaa garaa irra miidhaan qaqqabeefi kan miidhaa qaamaa yeroofi dhaabbataatiif saaxilaman jiraachusaanii hubateera jedhe.
Komishinichi bakkeewwan muraasaatti miseensa ykn deeggartoota ‘ABO Shaneeti” jedhamuun ijoollee keessan ”barbaadaman dhiyeessaa” jechuun abbaa ykn haadha hidhuu, ykn gochii ”abbaa warraa kee dhiyeessii” jechuun haadha warraa hiidhuun akka jiru hidhamtoota adda addaa irraa raga amansiisaa fudhadheera jedhe Komishinichi.
Kana malees, bakkeewwan tokko tokkootti namoota seera malee hidhuun ”miseensa ABO sheneeti’ jennee isin himanna jechuun dirsiisanii maallaqa kan gaafatan jiraachu komii hidhamtootaa irraa dhiyeete dha’us himeera.
Buufataalee poolisii hordoffiin irratti taasifamee keessa hidhamtoonni dubartootaa kan argaman yoo ta’u, irra caalaan isaanii ijoollee umuriin waggaa 5-10 ta’u waliin hidhamanii jiruus jedheera.
Gama biraatiin ammoo dhimmoota yakkaa keessatti hirmaataniiru shakkii jedhamuun ijoolleen hidhaman haala adeemsa seera addabbii yakkaa Keewwata 172tiitiin haalduree tokko malee wabiin akka gadhiifamaniif gaafatamulleen, bufataalee poolisii adda addaa keessatti ijoolleen umuriinsaanii waggaa 9-18 ta’an gaheessoota waliin bakka tokkootti hidhaarratti argamu jedheera Komishinichi.
Buufataalee gareen hordoffii Komishinichaa taasisee hedduu keessatti shakkamtoonni haala qulqullinni isaanii hin eegamneefi kutaa tokko keessatti haala fayyinsaaniif balaafamaa ta’een walitti baayyachuu akka qabaman, dhiyeessitiin nyaataa akka hin jirre, akkasumas tajaajjilli dhiyeessitii bishaan, lafa qulullinaafi wallaansaa akka hin jirre hubateera jedhe ibsichi.
Erga hordooffiin taasifameen booda haalliiwwan fooyyeeefaman akka jiraatan tilamaamulleen, keessattuu namoota ajaja mana murtii malee hidhuufi ajaja mana murtii fudhachuu diduun walqabtee hanga ammaatti rakkoon jiru itti fufuunsaa dhimma yaaddeessaadha jedheera.
Abbaan Alangaa Waliigalaa Oromiyaa sarbama mirga namoomaa eeraman kanneen ilaalchisuun Komishiin Poolisii Oromiyaa waliin qaree qorannoo waloo hundeessuun hojii qulqulleessuu hojjachuu himee, garuu argannoowwan kanneen mormuun deebii kenneera jedha ibsichi.
Komishinarri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr Daani’eel Baqalaa, haalli qabiinsa hidhamtootaa naannoo Oromiyaa furmaata ariifachiisaa kan barbaadu ta’uu ibsuun, qorannoon shakkamtoota osoo mana murtiitti hin dhiyeeffamiin yeroo dheeraaf maan hidhaa keessa turanii akka ariifatuufi mana murtiitti dhiyaachuun murtee haqaa akka argatan akka taasifamuu, miseensoonni poolisii hidhamtoota irratti sarbama mirga namoomaa qaqqabsiisan akka itti gaafataman gaafateera.
Akkasumas, shakkamtoota dubartootaafi daa’immanitiif dursi kennamuun, keessattuu daa’imman shakkii yakka keessatti hirmaataniiru jedhamuun hidhaman haaluma seeraatiin atattamaan wabiin akka gadhiifamaniif gaafateera.
Itti dabaluunis ”Dhimma haqa namoota yakkaan shakkamanii mana murtii seeraan aangoon kennameef qofaan akka ilaalamu gochuufi ajaja manneen murtii kabajuudhaaf xiyyeeffannoo addaa keennuutu barbaachisa,” jedhan Dr Daani’eel.
Source: bbc afaan Oromoo
In Ethiopia Mothers with their children from 5month to 9year and children from age 9 to 18 are detained with an allegation of their parents support of rebels/freedom fighters in Oromia.